Nhau - Tora iwe kuti uzive iyo "green green" muindasitiri yekupakira
Tora iwe kuti uzive "green green" muindasitiri yekupakira
Kutenga pamhepo uye pasiri pamhepo zvichafambiswa nezvakawanda zvekurongedza. Nekudaro, izvo zvisiri zvemamiriro ekunze uye zvisina kujairika kurongedza zvinokonzeresa kusvibiswa kwezvakatipoteredza. Nhasi, indasitiri yekupakata iri kuita "green green", ichitsiva zvinhu zvinosvibisa nemidziyo yekupakata inochengetedza zvakatipoteredza senge inogadziriswazve, inodyiwa, uye inogona kuora, kuti ikurudzire kusimukira kwechengetedzo yezvakatipoteredza uye kuchengetedza nharaunda yekugara kwevanhu. Nhasi, ngatizivei iyo "yakasvibirira kurongedza" pamwechete.
Packaging Chii chinonzi green kavha?
Green kurongedza kunoenderana nekusimudzira kusimudzira uye inosanganisira maviri mativi:
Imwe inobatsira pakugadziridza zviwanikwa;
Yechipiri ndiyo yakanyanya kukuvara kune zvakasikwa nharaunda.
Kudzokorora uye kudzokorodza kurongedza
Semuenzaniso, kurongedzwa kwedoro, zvinwiwa, soy muto, vhiniga, nezvimwe zvinogona kushandiswa mumabhodhoro egirazi, uye mabhodhoro epolyester anogona zvakare kudzokororwa neimwe nzira mushure mekudzokorodza. Iyo panyama nzira yakanangana uye yakanyatsocheneswa uye kupwanywa, uye iyo nzira yemakemikari kupwanya nekuwacha iyo yakadzoreredzwa PET (polyester firimu) uye kuigadzirisazve irimuchinhu chakadzokororwa chiputira zvinhu.
Zvinodyiwa zvekutakura zvinhu zvakapfuma mune zvakasvibirira, zvinodyiwa, zvisingakuvadzi kana kunyange zvinobatsira kumuviri wemunhu, uye zvine zvimwe hunhu senge simba. Ivo vakawedzera nekukurumidza mumakore apfuura. Izvo zvigadzirwa zvaro mbichana zvinonyanya kusanganisira starch, protein, chirimwa fiber uye zvimwe zvakasikwa zvinhu.
Atzvakasikwa zvipenyu kurongedza zvinhu
Natural zvakasikwa zvinhu senge bepa, huni, yemishenjere yakarukwa zvinhu, matanda machipisi, machira ekotoni machira, wicker, tsanga uye zvirimwa madzinde, mupunga mashanga, gorosi mashanga, nezvimwewo, zvinogona kuora zviri nyore mune zvakasikwa nharaunda, usasvibisa iyo ecological nharaunda, uye zviwanikwa zvinowedzerwazve. Mari yacho yakaderera.
Ichi chinyorwa hachina chete mabasa uye hunhu hwechinyakare mapurasitiki, asi zvakare inogona kutsemura, kudzikisira uye kudzoreredza mune zvakasikwa nharaunda kuburikidza nekuita kwevhu nemvura mvura, kana kuita kweiyo ultraviolet mwaranzi muzuva, uye pakupedzisira kuigadzirisazve isina-chepfu fomu. Pinda iyo ecological nharaunda uye dzokera kune zvakasikwa.
Packaging Biodegradable kurongedza inova yemberi maitiro
Pakati pezvirimwa zvekurongedza zvakasvibirira, "degradable package" iri kuita ramangwana maitiro. Kutanga kubva muna Ndira 2021, sezvo yakazara "plastiki inorambidza kurongeka" iri mukutenderera kuzere, mabhegi epurasitiki asingabvisike akarambidzwa, uye musika wepurasitiki nepepa unodzikiswa wapinda zviri pamutemo munguva inoputika.
Kubva pakuona kwekurongedza zvakasvibirira, sarudzo yakanyanya kufarirwa ndeiyi: hapana kurongedza kana kurongedza kushoma, izvo zvinobvisa zvachose kukanganisa kwepakeji pane zvakatipoteredza; inoteerwa neinodzosera, inodzoserwa kurongedza kana inogadziriswazve kurongedza. Kudzokorora mabhenefiti uye mhedzisiro kunoenderana neyakagadziriswa system uye maonero evatengi. Kana vanhu vese vaine ruzivo nezve kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, dzimba dzedu dzegirinhi dzinozoita zvirinani uye zvirinani!